FireStick Set Up - Fomba tsotra hitarihana (5 Mins) - Ahoana No
Ahoana ny fananganana Amazon FireStick?
Ny indostrian'ny onjam-peo dia mivadika ho tontolon'ny fifaninanana, ary ny orinasa rehetra miezaka ny tsara indrindra mba hanome anao zava-baovao sy tsara kokoa. Na izany aza, efa an-taonany maro, ary mbola tsy nisy ny lalao Firestick TV.Manana fahitalavitra Smart vaovao miasa mitovy aminy ianao, saingy i Firestick dia afaka mamadika ny fahitalavitra taloha ho fahitalavitra marani-tsaina, ary izany no mahatonga azy io ho vokatra tsara.
Ankoatr'izay, Firestick dia fitaovana fidirana an-tserasera izay mitondra anao streaming tsy an-kijanona ho an'ny fialamboly amin'ny sarany mora vidy. Miaraka amin'ny kalitao 1080P default, azo antoka fa fampiasam-bola mendrika izany. Na izany aza, olona maro no mbola tsy mahalala ity fitaovana mahafinaritra ity. Ny sasany dia manana fiheverana diso momba ny fananganana Firestick.
Noho izany, ity torolàlana ity dia hanampy anao hianatra ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Firestick TV:
Inona no atolotry ny Firestick?
Voalohany indrindra, Amazon's Firestick dia mamadika ny fahitalavitra anao ho Android Smart TV. Ergo, azonao atao ny misintona ny rindranasa Android, na dia ireo izay tsy ‘voalamina tsara amin'ny fahitalavitra’, ary mampandeha azy ireo milamina. Na izany aza, soloina ny serivisy DTH mahazatra anao izany.
Noho izany, Amazon dia manome fantsona maimaimpoana an'arivony ho anao na mety tsy ho ferana amin'ny faritra misy anao. Hahita haino aman-jery malaza maromaro ianao, ary koa fantsona tsy dia fantatra loatra. Ny fampiharana toa ny Netflix, Huli, ary Amazon Prime Videos dia efa napetraka ao amin'ny Firestick TV ihany koa.
Miankina amin'ny faritra, mety manana rindranasa streaming malaza ao amin'ny firenena ianao ao amin'ny Amazon Firestick. Izay no mahatonga ny Amazon Firestick ho fitaovana mahomby. Izy io dia mitondra anao sehatra fialamboly feno fahitalavitra sy mozika amin'ny fitaovana tokana sy mora vidy. Ny hany ilainao dia ny haingam-pandeha haingam-pandeha hahazoana fidirana atiny maimaim-poana sy ho mpikambana raha mikendry atiny premium ianao.
Inona no ilainao hametrahana Firestick?
Ny Amazon Firestick dia fitaovana mahitsy izay miasa miaraka amin'ny fitakiana kely indrindra. Na izany aza, mba hahazoana antoka fa manana ny zava-drehetra ianao, ity ny lisitry ny zavatra mety ilainao amin'ny fananganana ny Firestick ho an'ny fampisehoana optimum:
1. Seho TV mifanentana
Ny fahitalavitra nataonao dia tokony hifanaraka amin'ny HDMI. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tokony hisy output HDMI. Raha tsy izany dia azonao atao ny mampiasa ny adaptatera (fantatra koa amin'ny hoe converters) hifandraisana amin'ny RCA output TV ary hanome ny port HDMI. Aza adino fa ny standard Firestick TV dia manohana ny fampisehoana 1080P, izay tokony ho tsara. Na izany aza, raha nividy Firestick 4K HD ianao dia mety te hividy fahitalavitra mifanentana izay manohana ny fampisehoana 4K HD.
2. Fifandraisana Internet haingana
Firestick dia tsy manana safidin'ny fifandraisana Ethernet. Tsy miaraka amin'ny fifandraisana Internet ihany koa io. Noho izany dia mila Wi-Fi haingam-pandeha ao an-tranonao ianao hifandraisanao amin'ilay fitaovana famonoana afo. Tsara kokoa raha eo akaikin'ny rafitra no misy ny Wi-Fi. Mila fantsom-pifandraisana 2.5Ghz farafaharatsiny ianao mba hanana fifandraisana tsy tapaka.
3. Kaonty Amazon
Mila kaonty Amazon ianao raha te hanaingo ny Firestick ary hiditra ao. Raha nanafatra an'i Firestick tamin'ny alàlan'ny kaonty ianao dia hanana fampahalalana momba ny kaonty efa nisy, fa azonao atao ny mamerina azy amin'ny kaonty hafa raha tianao. Tsy mila mpikambana voalohany ianao raha te hiditra amin'ny Firestick TV.
4. Ireo mpiorina Firestick
Ny Amazon Firestick tsirairay avy dia misy USB flash drive (Firestick), tariby USB, adaptatera HDMI (tariby), ary fanaraha-maso lavitra. Hamarino tsara fa manana ireo rehetra ireo ianao alohan'ny hanombohanao ny fizotranao.
Ahoana ny fananganana Firestick?
Mora ihany ny fametrahana sy fametrahana an'i Firestick. Izy io dia karazana fitaovana ‘plug & play’ mety tsara izay mahatonga ny fanamboarana sy ny fiasa ho tsio-drivotra. Ireto misy toro-lalana haingana rehetra:
Fametrahana sy fivoriambe:
Raha tsy manana output HDMI ny fahitalavitra anao dia mila ampidiro ilay mpanova ary ampifandraiso amin'ny adaptatera HDMI na mivantana amin'ny Firestick Flash Drive
Ampifandraiso amin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra ny tariby USB. Raha tsy izany, raha manohana fivoahana USB ny fahitalavitrao dia afaka manome famatsiana herinaratra optimum izy mba hiasan'ny Firestick anao.
Raha vao mampifandray an'i Firestick amin'ny fahitalavitra ianao ary manome famatsiana herinaratra dia hanomboka hivoatra izy io.
Ny fizotry ny fananganana sy ny fidirana:
Raha vantany vao matanjaka ny rafitra dia tsy maintsy ampifandraisinao amin'ny Wi-Fi izany, indrindra raha manana teny miafina izy
Raha vao mifandray amin'ny famantarana Wi-Fi ankavanana ianao dia afaka manomboka amin'ny fizotry ny fisoratana anarana
Raha nanafatra tamin'ny alàlan'ny ID voasoratra anarana ianao dia mety tafiditra tao izany, ka azonao atao ny manova izany raha tianao.
Raha vao miditra ianao dia hanana fidirana amin'ny Amazon Firestick
Viola! Ankehitriny, ny mpanara-maso lavitra dia miasa toy izany koa amin'ny mpanara-maso lavitra hafa. Azonao atao ny mizaha ireo fantsona ary mahazo ny atiny tianao indrindra.
Misy famandrihana isam-bolana ve?
Ny Amazon firestick dia tsy manana saram-pisoratana anarana isam-bolana, fa manana fantsona malalaka be dia be azo ampiasaina amin'ny fialambolinao. Na izany aza, raha te hiditra amin'ny Amazon Prime Videos ianao dia mila manana mpikambana praiminisitra.
Toy izany koa, raha te hiditra amin'ny Netflix, Hulu, ary fampiharana premium hafa ianao dia tokony hanana ny fisoratana anarana. Tsy afaka miditra amin'izy ireo ianao raha tsy manana famandrihana.
Raha ny tena izy, ny Firestick dia mamadika ny fahitalavitra antononyo ho fahita lavitra amin'ny alàlan'ny fanomezana azy fidirana amin'ireo fampiharana malaza sy fantsona tsy hita isa. DTH no tantara ankehitriny. Firestick sy safidy hafa dia lasa ampahany amin'ny ho avy.
Miaraka amin'i Alexa ve i Firestick?
Ny mpampita lavitra dia manana mikraoba anatiny izay manohana ny baikon'ny feo Alexa. Mitovy amin'ny Echo izy io, ary azonao ampifandraisina amin'ny fitaovana an-trano hafa marani-tsaina izany. Na izany aza, ambany ny haavon'ny mic, ary tsy maintsy hiteny amin'ny lavitra ianao mba hifehezana Alexa. Izy io dia endri-javatra mety.
Inona no mahatonga an'i Firestick ho tsara kokoa noho ny fitaovana streaming hafa?
Misy safidy hafa toa an'i Roku sy Apple TV azo vidiana. Na izany aza, sehatra manokana ireo miaraka amin'ny famerana fidirana amina fampiharana sy sehatra maromaro. Amazon Firestick dia miasa amin'ny rafitra miasa misokatra, android. Noho izany, mamadika ny fahitalavitra mahazatra anao ho fahitalavitra mahira-tsaina.
Amazon Firestick dia miaraka amin'ny Prime Videos sy Prime Music. Na izany aza, mamela anao hatrany hisintona fampiharana streaming hafa. Azonao atao ny mampiasa azy io toy ny findainao Android ary mampidina rindranasa tsy voamarina akory izay tsy misy amin'ny magazay ofisialin'i Amazon.
Ity fahafaha-manao ity dia mahatonga an'i Amazon Firestick ho sehatra mahasarika kokoa noho ireo mpifaninana aminy. Azonao atao aza ny misintona VPN hanatsarana ny fiarovana ny Firestick sy ny fifandraisana Internet.
Amin'ity toro-lalana namboarina mora ity dia azonao atao ny manangana ny Firestick haingana. Araho ity fizotra ity ary azonao atao ao anatin'ny minitra vitsy. Tsy sarotra araka ny fieritreretanao ny fananganana afo. Raha manana fangatahana mifandraika amin'ny fizotran'ny fananganana ianao dia ampahafantaro anay.avelao ao amin'ny faritra maneho hevitra ny valinteninao.
Tranonkala mivantana amin'ny streaming an-tserasera
Statistika sy zava-misy Instagram (2020) - Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
ExpressVPN Mainty Zoma 2020 - Fampirantiana sy tolotra mahatalanjona
ny fomba ahazoana kaody mivantana xbox mivantana
maimaim-poana amin'ny Internet ny tranokala fampisehoana
lalao tsara indrindra ho an'ny boaty tv android
mamorona kaonty mpianatra praiminisitra amazon
ahoana no ahazoana ny mp3 horonan-tsary youtube
tranokala izay tsy sakanan'ny sekoly
valio ny fanadihadiana momba ny karatra fanomezana Amazon